နလေောငျခံနှုတျခမျးမြားနဲ့ဗီတာမငျစီ အကွောငျး – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
မိနျးကလေးတဈယောကျရဲ့ ပွီးပွညျ့စုံသောအလှတရားတှထေဲမှာ ပွညျ့ပွညျ့တငျးတငျးနှုတျခမျးသားလှလှလေးတဈစုံဟာလညျးအပါအဝငျဖွဈပါတယျ။ ကနျြးမာစိုပွပွေီး ဝငျးလကျတဲ့နှုတျခမျးသားတဈစုံရဲ့ ဆှဲဆောငျမှုဟာ ယောကျြားထုအပျေါမှာတော့ အတေျာ့ကိုကွီးမားပါတယျ။ မိနျးကလေးမှမဟုတျပါဘူး အမြိုးသားတှမှောလဲ ကနျြးမာပွီးယောကျြားပီသတဲ့နှုတျခမျးသားတှဟော ကွညျ့ကောငျးစှဲမကျဖှယျပဲဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ နှုတျခမျးသားတှကေိုကွညျ့ရုံနဲ့ လူတဈယောကျဟာ ကနျြးမာရေး ကောငျးမကောငျးကိုလညျး အကွမျးဖဉျြးအကဲခတျကွညျ့လို့ရပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ကနျြးမာလှပတဲ့နှုတျခမျးသားတဈစုံဟာ လူတဈဦးတဈယောကျရဲ့ အလှအပကိုဖျောညှနျးရာမှာ မရှိမဖွဈလိုအပျခကျြတဈခုအနနေဲ့ ရှိနတောဖွဈပါတယျ။
နလေောငျခွငျးဟာ နှုတျခမျးသားမှမဟုတျပါဘူး လူ့အရပွေားတဈခုလုံးကိုထိခိုကျစနေိုငျပါတယျ။ နရေောငျခွညျမှာပါတဲ့ UV light တှဟော အရပွေားကငျဆာကိုသာမက နှုတျခမျးသားကငျဆာကိုပါဖွဈစနေိုငျပါတယျ။ အောကျနှုတျခမျးသားဟာ အပျေါနှုတျခမျးသားထကျ ကငျဆာဖွဈနိုငျမှုမှာ (၁၂ဆ)ပိုမို မွငျ့မားပါတယျ။
နလေောငျနှုတျခမျးမြားဟာ နီရဲလာမယျ၊ရောငျလာမယျ၊နှုတျခမျးသားတှခွေောကျလာမယျ၊ပူစပျပူလောငျဖွဈမယျ၊ထိရငျနာမယျ၊သိပျဆိုးရငျ အရညျကွညျဖုလေးတှထေပွီး အနာတှပေါဖွဈနိုငျပါတယျ။
နလေောငျခံနှုတျခမျးမြားကို ကာကှယျ/ကုသရာမှာ ဗီတာမငျစီဟာ အသုံးဝငျပါသလား???
သုသတေနအခကျြအလကျတှမှော ကနျ့သတျခကျြအခြို့ရှိနပေမေယျ့ ဗီတာမငျစီဟာ နလေောငျခံနှုတျခမျးမြားအပျေါမှာကောငျးမှနျတဲ့အာနိသငျတှရှေိနတေယျဆိုတာကတော့ အသအေခြာပဲဖွဈပါတယျ။ အစားအစာထဲမှာပါတဲ့ဗီတာမငျစီသာမက ဗီတာမငျစီပါဝငျသောစားဆေး၊လိမျးဆေးမြားပါ နှုတျခမျးသားမြားကိုနလေောငျခွငျးမှကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ဗီတာမငျစီဟာ ဓါတျတိုးဆနျ့ကငျြသတ်တိ(Antioxidant)အစှမျးရှိတာကွောငျ့ UV light မှာပါဝငျတဲ့ Free radical မြားမှနှုတျခမျးသားအပျေါထိခိုကျခွငျးကိုလဲ ကာကှယျပေးပါတယျ။
ဒါ့အပွငျ ဗီတာမငျစီဟာ collagen ဖှဲ့စညျးမှုကိုလဲအားပေးပါတယျ။
Collagen တှဟော Protein မြားဖွဈကွပွီးအရပွေားရဲ့တငျးအားသာမက ကွှကျသား၊အရှတျတို့ဖှဲ့စညျးမှုမှာလညျး ပါဝငျတဲ့ပစ်စညျးမြားဖွဈပါတယျ။ ၎င်းငျးတို့ဟာ နှုတျခမျးသားရဲ့ဖှဲ့စညျးပုံနဲ့ တငျးရငျးမှုကိုအထောကျအပံ့ပေးထားတဲ့အရာလဲဖွဈပါတယျ။ ဗီတာမငျစီဟာ UV light ကွောငျ့ DNAပကျြစီး၍ဆဲလျမြားသဆေုံးခွငျးကိုလဲ လြော့နညျးစတောကွောငျ့ နရေောငျခွညျခံအရပွေားဆဲလျမြားပကျြစီးမှုကိုလဲ ကာကှယျပေးနိုငျပါတယျ။
ဗီတာမငျစီဖွညျ့စှကျအားဆေးသောကျသုံးခွငျးနဲ့ ဗီတာမငျစီပါဝငျသောလိမျးဆေးမြားလိမျးခွငျးဟာ နလေောငျဒဏျကွောငျ့နှုတျခမျးသားထိခိုကျမှုပွငျးအားကိုပါ လြှော့ခပြေးနိုငျစှမျးရှိပါတယျ။ ဗီတာမငျစီကို နရေောငျကာ(sunscreen)မြားနှငျ့တှဲဖကျလိမျးပါက နလေောငျဒဏျကွောငျ့နှုတျခမျးသားမြားပကျြစီးခွငျးကို အကောငျးဆုံးကာကှယျပေးနိုငျမယျလို့ ဆေးပညာရှငျမြားက မှတျခကျြပွုပွောကွားထားပါတယျ။
နလေောငျခွငျးကငျးပွီး ရှနျးစိုလှပတဲ့ စှဲမကျဖှယျနှုတျခမျးအလှလေးမြား ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစေ။
မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံသောအလှတရားတွေထဲမှာ ပြည့်ပြည့်တင်းတင်းနှုတ်ခမ်းသားလှလှလေးတစ်စုံဟာလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာစိုပြေပြီး ဝင်းလက်တဲ့နှုတ်ခမ်းသားတစ်စုံရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုဟာ ယောကျာ်းထုအပေါ်မှာတော့ အတော့်ကိုကြီးမားပါတယ်။ မိန်းကလေးမှမဟုတ်ပါဘူး အမျိုးသားတွေမှာလဲ ကျန်းမာပြီးယောကျာ်းပီသတဲ့နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ ကြည့်ကောင်းစွဲမက်ဖွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုကြည့်ရုံနဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမကောင်းကိုလည်း အကြမ်းဖျဉ်းအကဲခတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာလှပတဲ့နှုတ်ခမ်းသားတစ်စုံဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပကိုဖော်ညွှန်းရာမှာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုအနေနဲ့ ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။
နေလောင်ခြင်းဟာ နှုတ်ခမ်းသားမှမဟုတ်ပါဘူး လူ့အရေပြားတစ်ခုလုံးကိုထိခိုက်စေနိုင်ပါတယ်။ နေရောင်ခြည်မှာပါတဲ့ UV light တွေဟာ အရေပြားကင်ဆာကိုသာမက နှုတ်ခမ်းသားကင်ဆာကိုပါဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်။ အောက်နှုတ်ခမ်းသားဟာ အပေါ်နှုတ်ခမ်းသားထက် ကင်ဆာဖြစ်နိုင်မှုမှာ (၁၂ဆ)ပိုမို မြင့်မားပါတယ်။
နေလောင်နှုတ်ခမ်းများဟာ နီရဲလာမယ်၊ရောင်လာမယ်၊နှုတ်ခမ်းသားတွေခြောက်လာမယ်၊ပူစပ်ပူလောင်ဖြစ်မယ်၊ထိရင်နာမယ်၊သိပ်ဆိုးရင် အရည်ကြည်ဖုလေးတွေထပြီး အနာတွေပါဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
နေလောင်ခံနှုတ်ခမ်းများကို ကာကွယ်/ကုသရာမှာ ဗီတာမင်စီဟာ အသုံးဝင်ပါသလား???
သုသေတနအချက်အလက်တွေမှာ ကန့်သတ်ချက်အချို့ရှိနေပေမယ့် ဗီတာမင်စီဟာ နေလောင်ခံနှုတ်ခမ်းများအပေါ်မှာကောင်းမွန်တဲ့အာနိသင်တွေရှိနေတယ်ဆိုတာကတော့ အသေအချာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာထဲမှာပါတဲ့ဗီတာမင်စီသာမက ဗီတာမင်စီပါဝင်သောစားဆေး၊လိမ်းဆေးများပါ နှုတ်ခမ်းသားများကိုနေလောင်ခြင်းမှကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်စီဟာ ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်သတ္တိ(Antioxidant)အစွမ်းရှိတာကြောင့် UV light မှာပါဝင်တဲ့ Free radical များမှနှုတ်ခမ်းသားအပေါ်ထိခိုက်ခြင်းကိုလဲ ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ဗီတာမင်စီဟာ collagen ဖွဲ့စည်းမှုကိုလဲအားပေးပါတယ်။
Collagen တွေဟာ Protein များဖြစ်ကြပြီးအရေပြားရဲ့တင်းအားသာမက ကြွက်သား၊အရွတ်တို့ဖွဲ့စည်းမှုမှာလည်း ပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်။ ၎င်းတို့ဟာ နှုတ်ခမ်းသားရဲ့ဖွဲ့စည်းပုံနဲ့ တင်းရင်းမှုကိုအထောက်အပံ့ပေးထားတဲ့အရာလဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဟာ UV light ကြောင့် DNAပျက်စီး၍ဆဲလ်များသေဆုံးခြင်းကိုလဲ လျော့နည်းစေတာကြောင့် နေရောင်ခြည်ခံအရေပြားဆဲလ်များပျက်စီးမှုကိုလဲ ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ဗီတာမင်စီဖြည့်စွက်အားဆေးသောက်သုံးခြင်းနဲ့ ဗီတာမင်စီပါဝင်သောလိမ်းဆေးများလိမ်းခြင်းဟာ နေလောင်ဒဏ်ကြောင့်နှုတ်ခမ်းသားထိခိုက်မှုပြင်းအားကိုပါ လျှော့ချပေးနိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ ဗီတာမင်စီကို နေရောင်ကာ(sunscreen)များနှင့်တွဲဖက်လိမ်းပါက နေလောင်ဒဏ်ကြောင့်နှုတ်ခမ်းသားများပျက်စီးခြင်းကို အကောင်းဆုံးကာကွယ်ပေးနိုင်မယ်လို့ ဆေးပညာရှင်များက မှတ်ချက်ပြုပြောကြားထားပါတယ်။
နေလောင်ခြင်းကင်းပြီး ရွှန်းစိုလှပတဲ့ စွဲမက်ဖွယ်နှုတ်ခမ်းအလှလေးများ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေ။